Evanjelin'i Gamaliela - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Filazantsaran'i Gamaliela)
Ny Evanjelin'i Gamaliela na Filazantsaran'i Gamaliela dia evanjely apokrifa izay ahitana ny mpitantara izay miantso ny tenany hoe Gamaliela, ilay mpampianatra an'i Paoly avy any Tarsisy. Ity fitantarana ity dia hita ao amin'ny ampahan-dahatsoratra misisika ao amin'ny toritenin'ny eveka Heriagosy, dia ny Fitomanian'i Maria. Io lahatsoratra io dia fandikana amin'ny teny etiopiana (teny gezy) ny lahatsoratra amin'ny teny arabo, izay mety avy tamin'ny lahatsoratra amin'ny teny kopta.
Ny lahatsoratra ao amin'ny Fiangonana kristiana kopta, izay manao an'i Pontio Pilato, ilay nanameloka an'i Jesosy, ho olo-masina niova finoana ho kristiana, dia maneho azy amin'ny fomba fijery tsara. Naka aingam-panahy amin'ny dikan-teny A an'ny Asan'i Pilato (izay atao hoe Evanjelin'i Nikodemo), ary mety azo lazaina fa tamin'ny tenantenan'ny taonjato faha-5 no nanoratana azy. Natovana io ampahan-dahatsoratra io ny resaka an-taratasy nataon'i Pilato sy i Heroda Antipasy, izay misy fahasamihafana be amin'ireo dikan-teny hafan'izany resaka izany.
Ny andalana sasany dia mety nampifandraisina amin'ny sombin-dahatsoratra amin'ny teny kopta, izay nomena ny anarana hoe Evanjelin'ny Apostoly roa ambin'ny folo.
Ny fitantarana ny fijaliana niaretan'i Kristy ao amin'ny Evanjelin'i Gamaliela dia narafitra araka ny teny frantsay taloha, izay dikan-teny misy amin'ny soratanana miisa any amin'ny dimy ambin'ny folo any ho any voasotatra tamin'ny taonjato faha-15 sy faha-15.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelin%27i_Gamaliela&oldid=971975"
Dernière modification le 5 Jolay 2019, à 10:41
Voaova farany tamin'ny 5 Jolay 2019 amin'ny 10:41 ity pejy ity.